google company ရဲ့ ၀င်ငွေများကိုဆွေးနွေးခြင်း — MYSTERY ZILLION
google company ရဲ့ ၀င်ငွေများကိုဆွေးနွေးခြင်း
June 2013 edited June 2013 in Daily Life
ကျွှန်တော့အထင် google နဲ့ facebook တို့ company နှစ်ခုမှာ သာမန်အမြင်မှာတော့ google search engine ,youtube,gtalk,gmail တို့ကို free ပေးပြီး facebook ကတော့ facebook server ကြီးကို free ပေးသုံးထားပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ ၀င်ငွေဘယ်ကရလည်းလို့မေးကြပါတယ်။တစ်ချို့ပြောကြတယ် ကြော်ငြာကပေါ့ ဒါတော့လူတိုင်းသိမယ်ထင်ပါတယ်။အဲဒီလောက်နဲ့ သူတို့ company ကကြီးထွားနိုင်မလား ? ကျွှန်တော့အထင်တော့ တစ်ကမ္ဘာလုံး ကသတင်းတွေက်ို တပက်ရိုက်ရောင်းစားနေတာလားမသိဘူးနော် အစ်ကိုတို့။အရမ်းသိချင်တာပေါ့။ free ပေးတဲ့အလုပ်က တော်တော်ကိုစီးပွားရေးကိုက်မယ်ထင်တယ်ဗျ။လျို့၀ှက်ချက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်လို့ပါ။သိတဲ့သူရှိကြရင်ဆွေးနွေးကြပါအုံး။
Google ရဲ႕ Income 95% ေလာက်က AdWords နဲ့ AdSense ကနေရတာ အဲလောက်ကြီးနိုင်ပါ့မလားဆိုတာက ကြီးနိုင်ပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခုအချိန်မှာသူက ထိပ်ဆုံးကဖြစ်နေတော့ အင်တာနက်သုံးတဲ့လူတွေရဲ့ 90% လောက်က Google သုံးတယ်ဆိုတော့ အဲဒီလောက်ပမာဏအပေါ်ကနေ Advertising နဲ့ရမယ့်ပမာဏဟာ ဘယ်လောက်များမလဲ သိနိုင်ပါတယ်။ တစ်ြခားဝင်ငွေဆိုရင် Google Checkout လိုဟာတွေရှိမယ် နောက်ပြီးတော့ Google App for Business လိုဟာတေွက အရောင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းတက်လာတယ် ဒါပေမယ့်အခုအထိတော့ Advertising ကဝင်ငွေကို မှီဖို့တော့ဘယ်လိုမှ မမြင်သေးပါဘူး။ Google, Gmail အဲဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့အလကားသုံးဖို့အတွက် သူ့ရဲ့ကြော်ငြာကို ကျွန်တော်တို့က ကြည့်ပေးနေရတာပဲ ကြော်ငြာမပါတဲ့ဟာကျတော့ Google App for Business ဖြစ်သွားပြီ 50$/Year ပေးရတယ်။ တကယ်တော့ အလကားရတဲ့အရာ ဘာမှမရှိပါဘူး သုံးတဲ့လူကလည်း အခကြေးငွေတိုက်ရိုက် မပေးရဘူးဆိုရင်လည်း ပေးတဲ့လူဝင်ငွေရှိအောင် တစ်နည်းနည်းတော့ လုပ်ပေးနေရတာပါ။
Google reportedly earned $1 billion from Google Apps for Business last year.
2013 Financial Tables , http://investor.google.com/financial/tables.html
Most income from Adword
Google own Admob
Google own Youtube and it also include ads
Google own Google Play Store (30% for 1 app sell. Developer will get 70%)
Google Sell Nexus phone and always out of stock at first week.
Google Sell G Drive Storage
Google have Google Checkout
Google sell Music
Google Sell books
Google have google analytics and it have premium feature. http://www.google.com/analytics/premium/